लोपुन्मुख अवस्था रहेको संस्कृति संरक्षण गर्नु युवा भुमिका महत्वपुर्ण – ebaglung.com
२०७६ आश्विन २०, सोमबार ०८:१६	थप समाचार
भरत सापकोटा, बिहुँ हटिया २०७६ असोज २० । काँठेखोला गाउँपालिका वडा ६ बिहुँ हटियामा अवस्थित रहेको बिहुँकोटमा बिहुँकोट खेलकुद तथा समाज विकास केन्द्र को आयोजना मा नौमति पन्चे बाजा प्रतियो गिता सम्पन्न भएको छ।
सो कार्यक्रम बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेपाल कोशिकी कराते का प्रमुख संरक्षक डन्डपानी कंडेल ( D P ) लोपन्मुख अवस्थामा रहेको नौमति बाजा संरक्षण यस खेलकुद केन्द्रले देखाएको अग्रसरता सहरानिय रहेको बताउदै सस्कृति सरक्षण मा यस्ता कुरा ले महत्वुपुर्ण भुमिका खेल्ले बताए। कडेंलले भने हाम्रो नेपाल मा रहेका जुनसुकै मौलिक संस्कृतिहरु र सभ्यताहरु समेत ओझेलमा परेको बताउदै संस्कृतिहरुको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताए।
उक्त नौमति बाजा प्रतियोगिता मा धेरै टिमि सहभागिता हुने भनिएपनि ३टिम मात्र सहभागि भएका थिए जस्मा प्रथम काठेखोला १ धिमी पन्चेबाजा समुह द्धितिय सत्यावति पन्चेबाजा समुह काठेखोला ५राहाले र तृतिय बिहुकोट पन्चेबाजा समुह काँठेखोला ५भएका उक्त प्रतियोगिता मा प्रथम हुनेले खशी र प्रमाण पत्र त्यस्तै द्धितिय र तृतिय हुनेले क्रमश ६हजार ४हजार नगद प्राप्त गरेका थिए।
सो कार्यक्रममा प्रथम पुस्कार खसि वडा ६ सन्देश कंडले त्यस्तै द्धितिय पुस्कार रु ६०००हजार वडा ६कै बलबाहादुर क्षेत्रि मुकेश
र तृतिय पुस्कार वडा ५मा रहेको सापकोटा ब्रदर्शले गरेका थिए।
सो कार्यक्रम मा पुर्व सासंद गोबिन्द्र प्रसाद कडेंल ,वडा ५का वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद कंडेल ,गाउंकार्यपालिका सदस्य टिका संगम वि क, लगाएत ले मन्त्ब्य राखेका थिए।
कार्यक्रम संयोजक हरि सापकोटा स्वागत मा संचालित यस कार्यक्रम मा यसै केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कडेंल को अध्यक्षता मा सम्पन्न कार्यक्रम को संचालन सचिव सन्तोष पुनले गरेका थिए।
छुट्टा-छुट्टै दुर्घटनामा ढोरपाटन-२ सेरा र निसीखोला-६ मा दुईको मृत्यु, १ घाईते !
२०७६ पुष १८, शुक्रबार १४:५०
बिहुँकोट अमर क्याम्पसको आठौँ वार्षिकोत्सब समारोह सम्पन्न !
२०७६ पुष १४, सोमबार १६:०२
अमर माध्यमिक विद्यालय, बिहुँलाई जुनियर एन सी सी को वेस्ट प्लाटुन प्राप्त !